Testosteron-dronono tsy manara-penitra Vatan'ny mpamokatra & Mpamatsy - Factory
Ny testam-pandrenesana tsy an-kijanona, amidy eo ambanin'ny anarana marika Nebido, Aveed, ary Andriol ankoatra ny hafa, dia fanafody androgen sy anabolic (AAS) fanafody izay ampiasaina indrindra amin'ny fitsaboana ny halatra testosterone ambany amin'ny lehilahy. Ampiasaina amin'ny fitsaboana hormonina ho an'ireo lehilahy mpandika lalàna koa izy io. Voan'ny vavany roa na intelo isan-kerinandro amin'ny sakafo izy io na ateraky ny fitsaboana amin'ny hozatra isaky ny herinandro 12 na mihoatra.
Rano Testosterone tsy misy vaksiny (5949-44-0) video
Rojo Testosterone tsy ampy ny potika (5949-44-0)
Ny testosterone tsy an-kira dia ny endokanoate, ny testosterone androgen, ny gonadotropin-sekretera manakana sy ny hetsika fanoloana hormone. Satria ny testosterone dia manakana ny sekreteran'ny gonadotropins avy amin'ny glandophya, ny fitantanana ny testosterone dia mampihena ny tsiambaratelon'ny hormone luteinizing (LH). Amin'ny fampihenana ny tsiambaratelon'ny LH, ny fitomboan'ny sela Leydig, izay ampirisihan'ny LH amin'ny famokarana testosterone, dia mety ho voasedra. Ankoatr'izany, ity mpitsabo ity dia manosika ny fikajiana ny toetra maha-lahy sy maha-lahy azy ary azo ampiasaina amin'ny fanoloana testosterone amin'ny lahy hypogonadal.
Rojo testosterone tsy misy poizina (5949-44-0) Specifications
Product Name Rojo testosterone tsy misy pentina
Anarana simika Toeram-pandaharam-be tsy ampy hery; 5949-44-0;
Drug Class Tsy misy daty misy
mitsonika Point 64-64ºC
Water Solubility Mora mampivaingana
Application Ny vovo-tsain'ny tsy ampy fanina testosterone dia ny endrianoate ester ny testosteron androgen
Inona no atao hoe vovo-dronon'ny tsy ampy ovy (5949-44-0)?
Ny testosterone undecanoate poids dia ny prostrug ester of testosterone ary manana asidra maniry midadasika ao amin'ny toerana 17Beta. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fampidiran-tsonia ao amin'ny atletan-tsika ary amin'ny kapotsaka am-bava, ary aseho amin'ny fitsaboana ny tsy fahampian'ny testosterone. Tsara homarihina fa ny fitsaboana testosterone tsy afa-poana dia aseho fotsiny amin'ny fitsaboana ny toe-piainana ipogonadaly misy etiolojia mifototra amin'ny etika ary tsy tokony hampiasaina amin'ny fitantanana ny "hypogonadism" mifandraika amin'ny taona.
Ahoana ny fomba famerenana ny vovo-dronon'ny tsy testosterone (5949-44-0) asa
Testosterone undecanoate vovoka dia lava be nanaovana ny testosterone, lehilahy hormonal ny lahy ara-nofo. Testosterone dia tompon'andraikitra amin'ny fivoarana ara-dalàna sy ny fampiroboroboana ny lahy sy ny taovam-pananahana. Anisan'izany ny fivoarana sy ny fampandrosoana ny taovan'ny lahy sy ny vavy, ny testicles, ny prostate, ny volo amin'ny vatana, ny fihenan-tsakany feo, ary ny fizarana hozatra sy ny tavy.
Rojo testosterone tsy misy poizina (5949-44-0) Dosage
Lehilahy mihoatra ny 18 taona: Ny dosilidan'ny testosterone undecanoate voatendry dia 750 mg (3 ml) intramuscularly; ary avy eo dia 750 mg (3 ml) intramuscularly aorian'ny herinandro 4, avy eo 750 mg (3 ml) intramuscularly isaky ny herinandro 10 aorian'izany.
Ny safidy sy ny fampiasana ny testosterone undecanoate dia tsy voavaha ho an'ny lahy eo amin'ny 18 taona.
Rojo testosterone tsy misy pentina (5949-44-0) Benifits
Ny tsiranoka tsy misy aokanoate testosterone dia ampiasaina amin'ny lehilahy izay tsy ampy ny vatana voajanahary antsoina hoe testosterone. Ny testosterone dia an'ny kilasy misy zava-mahadomelina antsoina hoe androgens. Ny vaksin-tsiran-tsolika Testosterone dia manampy ny vatana hampivelatra sy hitazonana ny toetra maha lahy sy ny maha lahy na vavy, toy ny feo malefaka sy volo vatana. Izany koa dia manampy amin'ny fihazonana ny hozatra sy hisorohana ny fahabangana amin'ny taolana, ary ilaina amin'ny fahafaha-manao ara-nofo / faniriana voajanahary.
Ny tsimokaretina tsy matevina testosterone dia mety ho ampiasaina amin'ny ankizilahy tsy manambady koa mba hahatonga ny fahamaotiana ho an'ireo izay manana fahantrana.
Ity vokatra ity dia tsy tokony hampiasaina amin'ny vehivavy.
Mividiana vovo-panafody tsy hita maso avy amin'ny Buyaas.com